Ugaas C/raxmaan Ugaas C/llaahi oo sheegay in laqiyaanay Beeshiisa +Cod+Sawirro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Ugaas C/raxmaan Ugaas C/llaahi oo sheegay in laqiyaanay Beeshiisa +Cod+Sawirro
Ugaas Cabdiraxmaan Ugaas Cabdullaahi oo ka mid ah ugaasyada Soomaaliyeed kanaa mid ahaa duubab dhaqameedyadii ka qeybgalay shirka maamul u sameynta Hirshabeelle ayaa ku eedeeyay madaxda dowlada federalka iyo madaxda maamulka Hirshabeelle inay balan ka bax ku sameeyeen.
Ugaas Cabdiraxmaan oo ka hadlay saaka kulan ay ugaga dhowaaqeysay musharax Aqalka Sare Xabiibo Nuur Gendi inay ka tanasushay musharaxnimadeeda ayna ka soo qeybgaleen duubab dhaqameedyo,xildhibaano iyo waxgarad kale.
“Waxaan ka mid ahaa duubabkii dhaqankii u dhabar adeygay shirka Hirshabelle waxaan la kulmay saddex shir madaxda Hirshabelle heer baarlamaan iyo heer Madaxweyne saddex mar ayaan ballan galnay waxbana kama soo bixin.”ayuu yiri Ugaas Cabdiraxmaan.
Ugaaska ayaa sheegay in Madaxweynaha dowlada Federalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cosoble ay hore ugu ballameen in beesha Gaaljecel 2 kursi laga siin doono Aqalka Sare balse balantii loogaga baxay.
Sidoo kale waxaa goobta ka hadashay Marwo Xabiibo Nuur Gendi oo xilal kala duwan hore ugaga soo qabtay gobolka Sh/dhexe kana mid ahayd baarlamaankii dowladii Carte iyadoo sheegtay in oday dhaqameedyada beesheeda ay ka codsadeen in ay ka harto tartanka doorashada Aqalka Sare iyadana ay aqbashay.
Sidoo kale munaasabadan ayaa waxaa ka hadlay Daahir AMiin Jeesow oo kamid ah xildhibaanada dowlada Soomaaliya ayaa ku dhaliilay in dowlada aysan beesha uu ka soo jeedo oo degta labada gobol Sh/dhexe iyo Hiiraan ayna 2 kursi ku lahaayeen Aqalka Sare balse laga duudsiyay xaqooda.
Warkan ka soo baxay duubka dhaqanka beesha Gaaljecel iyo xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay ka socoto magaalada Jowhar doorashada xubnaha Aqalka Sare.